Galmudug oo xukun dil ah ku riday Haweenay | Baydhabo Online
Galmudug oo xukun dil ah ku riday Haweenay
Maxkamada Sare ee Maamulka Galmudug ee fadhigeeda uu yahay Magaalada Cadaado, ayaa xukun dil ah waxa ay ku riday Haweenay horay u dishay gabar yar oo todobo sano jir aheyd.
6-dii Bishii Maarso ayey haweenaydaan duleedka Magaalada Cadaado markii ay ku dishay gabar oo todobo sano jir aheyd, kadibna meydkeeda waxa ay ku riday Jawaan oo waxa ay ku tuurtay duleedka Degmada Cadaado.
Sababta Haweenaydaasi ay u dishay Gabadha yar ayaa waxa ay ku sheegtay inay aheyd, kadib markii ay dhowr mar soo tuuryeysay gurigeeda.
Maxkamada Sare ee Galmudug oo kiiskaan gacanta ku haysay, ayaa shalay ugu dambeyn gaartay go’aanka ku saabsan Kiiskaan, waxaana xukun dil toogasho ah lagu riday haweenayda gabadha yar dishay oo iyadabu horay u qiratay inay falkaasi geysatay.
Garsooraha maxkamada Sare ee Galmudug Sheekh Maxamed Guuleed Kaynaan oo Warbaahinta la hadlay, ayaa sheegay reerka Gabadha yar inay dalbadeen qisaas, ayna diideen wax diyo ah inay qaataan.
“Naag baa waxa ay dishay Gabar yar oo kas u dishay oo gowracday, maxkamada ayaa la isla yimid, reerkiina wuxuu dalbaday Qisaas, waana loo xukumay Qisaasta.” Ayuu yiri Garsooraha Maxkamada Sare Galmudug.
Garsooraha maxkamada Sare ee Galmudug ayaa sidoo kale digniin wuxuu u diray Odayaasha Dhaqanka Magaalada Cadaado oo kiisaska dilalka dhaca isku daya inay ku xaliyaan qaab Xeer ah, wuxuuna sheegay wax waliba inay ku wanaagsan yihiin sharciga in lagu kala baxo.